साउन १० गतेबाट ३ अर्ब रुपैयाँ बराबारको ऋणपत्र निष्कासन गर्दै नबिल बैंक, ब्याजदर कति ? - Arthasansar
साउन १० गतेबाट ३ अर्ब रुपैयाँ बराबारको ऋणपत्र निष्कासन गर्दै नबिल बैंक, ब्याजदर कति ?
आइतबार, ०३ साउन २०७८, ०७ : ५९ मा प्रकाशित
नबिल बैंक बैंक लिमिटेडले साउन १० गते बिहीबारबाट ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ ।
जसमध्ये बैंकले अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नेनेछ भने बाँकी १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको १८ लाख कित्ता व्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ।। यसैगरी, सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिने कुल ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ ।
बैंकले ७ वर्ष अवधिको ८ प्रतिशत ब्याजदर रहेको '८% नबिल डिबेन्चर २०८५' नाममा ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो ।